I-Estradiol Valerate powder (979-32-8) kunye nomzi mveliso
/ iimveliso / abanye / Umgubo we-Estradiol Valerate
Akukho kalo SKU: 979-32-8. Udidi: abanye
I-AASraw ikunye kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwinqanaba elincinci le-Estradiol Valerate powder (979-32-8), phantsi kolawulo lweCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Estradiol valerate powder i-hormone yesetyhini yesetyhini. Isebenza ngokutshintsha ii-estrogens zemvelo kwintokazi engakwazi ukuvelisa i-estrogen eyaneleyo. Isebenza ngomhlaza wesifo seprotate ngokuxhathisa amahomoni angamadoda.
Estradiol Valerate powder ividiyo
I-Raw Estradiol I-powder powder
igama: Estradiol Valerate
Ifomula yeMolekyuli: C23H32O3
Ubunzima Ezinto: 356.4984
I-Raw Estradiol Ukusetyenziswa kwefowuni ekujikelezweni kwe-steroids
Igama lesiqhelo: i-estradiol valerate, i-ess-tra-DIE-ole (i-CAS 979-32-8)
Igama leBrama: Delestrogen
Ukusetyenziswa kwe-Raw Estradiol
Sebenzisa i-estradiol valerate njengoko ilawulwa ngugqirha wakho. Hlola ileyibhile kwilisi yee-direcing instructions. Hlola ileyibhile kwilisi yee-direcing instructions.
Isilumkiso kwi-Raw Estradiol I-powder powder
Ezinye iimeko zonyango zinokusebenzisana ne-validate ye-estradiol. Buza umboneleli wakho wezempilo ukuba i-estradiol valerate (i-CAS 979-32-8) inokusebenzisana namanye amayeza owathathayo. Khangela inkonzo yakho yonakekelo lwempilo ngaphambi kokuba uqale, uyeke, okanye utshintshe umthamo wonyango.
I-valradiate ye-Estradiol idla ngokuphathwa kwaye igcinwe ngumboneleli wezempilo. Ukuba usebenzisa i-validate ye-estradiol ekhaya, isitolo se-estradiol valerate njengoko ulawulwa ngumkhemisi wakho okanye umboneleli wezempilo. Gcina i-estradiol valerate ngaphandle kokufikelela kwabantwana kunye nezilwanyana ezifuywayo.I-valerate ye-Estradiol ivame ukuphathwa kwaye igcinwe ngumboneleli wezempilo. Ukuba usebenzisa i-validate ye-estradiol ekhaya, isitolo se-estradiol valerate njengoko ulawulwa ngumkhemisi wakho okanye umboneleli wezempilo. Gcina i-estradiol valerate ngaphandle kokufikelela kwabantwana kunye nezilwanyana ezifuywayo.
I-Estradiol Valerate Powder (i-CAS 979-32-8)
I-Raw Estradiol I-Valerate powder Marketing
Indlela yokuthenga i-Estradiol i-powder powder (i-CAS 979-32-8) esuka kwi-AASraw